Fihaonambe GV tao Medellin, Kolombià: Paisa Power ho an’izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2019 13:14 GMT
Nitondra ahy tany Medellin ny diako farany. Ny tena marina, tsy nanantena ny hikarakara fihaonana aho satria tsy mihoatra ny roa na telo ireo mpandikateny monina ao Medellin. Na izany aza, tamin'ity indray mitoraka ity, nahazo fandraisana tsara sy mpandikateny iray aho, Albany Rivera, nanamafy fa afaka mihaona foana amin'ireo solontenan'ny GV hafa izy. Mba hialàna amin'ny fihaonana ho an'olona roa fotsiny, nasaiko i Cati sy Lully, mpanoratra GV eo an-toerana izay azoko nantsoina foana, ary koa i Gabriel sy Henry, izay anisan'ny Hiperbarrio, tetikasa filamatra an'ny Rising Voices ao Medellin.
Araka izany, ny zoma 8 jolay hariva, tao amin'ny fisotroana kafe iray milamindamina ao afovoan-tanàn'i Medellin, niaraka tamin'i Cati aho mba hiandry an'ireo vahiny nasainay. Hafaliana be ny ahy, nipoitra tsirairay ry zareo, na dia i Lady Dianne izay anisany nandray anjara ihany koa tamin'ny Hiperbarrio aza, dia tonga ary noraisina an-tanandroa.
Tokony handramantsika atao izay hampisy ireny fihaonana kely iarahan'ireo mpandika teny ireny, araka izay azo atao (Miarahaba Mohammed!). Eo ampiandrasana izany, ampahafantariko anao ny fotoana sy ny toerana mikasika an'ireo diako amin'ny manaraka.
Tamin'ny hatsaram-panahy no nandikan'i Helen Siers ho amin'ny teny anglisy ity lahatsoratra ity